Ahoana no ahazoan'ny Analytics an'izany info rehetra izany? | Martech Zone
Alahady, Martsa 29, 2009 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tamin'ity faran'ny herinandro ity dia niasa (toa ny mahazatra) aho. Tsy tsara ve raha manokatra ny Google Analytics ianao ary mahita hoe firy ny olona mamaky ny RSS RSS anao? Inona moa fa ireo dia mbola fitsidihana ny tranokalanao sy ny atiny, sa tsy izany? Ny olana, mazava ho azy, ny RSS feeds dia tsy mamela ny code hampiasaina rehefa misokatra ny atiny (karazana). Na izany aza, ny pejin-tranonkalanao.
Raha te hianatra bebe kokoa momba ny Web Analytics ianao, dia boky iray sy boky iray ihany no hatolotro, Avinash Kaushik's boky, Web Analytics iray ora isan'andro. Avinash dia manazava tsara ny antony nialanay tamin'ny sisin'ny serivera Analytics amin'ny lafiny client Analytics ary koa ny fanamby amin'ny tsirairay.
Ity misy santionany amin'ny fangatahana sary sy miova querystring:
Nanandrana nanangona ireo variana querystring rehetra aho tamin'ny alàlan'ny fikarohana fikarohana samihafa tranonkala:
utmac = "Nomera kaonty"
utmdt = "Lohateny amin'ny pejy"
utmfl = "kinova Flash"
utmhn = "Mangataka anarana hostname"
utmn = "Isa tsy miova - novokarina isaky ny __utm.gif nahavoa ary nampiasaina hisorohana ny fangejana ny gif hit"
utmp = "Pejy - ny fangatahana pejy sy ny masontsivana fangatahana"
utmr = "Loharano manondro (url referral | - | 0)"
utmsc = "Colour de écran"
utmsr = "Fanapahan-kevitra amin'ny efijery"
utmt = "Karazan'gg hit (tran | entana | imp | var)"
utmul = “Fiteny (lang | lang-CO | -)”
utmwv = "kinova UTM"
utmctm = Fampielezan-kevitra Mode (0 | 1)
utmcto = Famaranana amin'ny fampielezan-kevitra
utmctr = Teny fikarohana
utmccn = Anaran'ny fampielezana
utmcmd = Mediam-bahoaka fampielezan-kevitra (mivantana), (organika), (tsy misy)
utmcsr = Loharanon'ny fampielezan-kevitra
utmcct = Votoatin'ny fampielezan-kevitra
utmcid = Fanentanana ID
Tsy azoko antoka ny roa amin'ireto… ary tsy haiko raha mbola misy hafa, saingy tena ilaina ireo raha te hiara-hiasa miaraka amin'ny fangatahanao sary ianao mba hisoratra anarana fanampiny ao amin'ny kaonty Google Analytics - ohatra… ho an'ireo mpamaky RSS anao!
Androany dia mizaha toetra ny teôria aho… Nanangana fangatahana sary aho tokony ampitao amin'ny Google Analytics ny fampiasana RSS. Ny fanamby mazava ho azy dia satria tsy misy cookie na mpamaritra fangatahana manokana. Ilay mpisoratra anarana afaka sokafy ny fahana mitovy ary misorata anarana malaza Google Analytics. Mbola hanohy hi-tweaking ihany aho, ary ho hitako raha afaka manana zavatra matanjaka kokoa aho.
Ity ny fangatahako sary… Mampiasa ny Plugin PostPost WordPress Namolavola sy nametraka ny kaody aho taorian'ny atin'ny fahana:
Fanamarihana iray, handrefesana ny hitsoka ity fa tsy ny mpamandrika! Raha te hanandrana handrefesana ny mpamandrika ianao, dia hanolotra hetsika onclick amin'ny kisary RSS anao aho. Mazava ho azy, malahelo an'izay rehetra misoratra anarana amin'ny alàlan'ny mombamomba ny rohy ao amin'ny lohateninao… ka tsy manandrana akory aho. Raha manana eritreritra ny zavatra ataoko ianao na ny fomba fanatsarana azy dia ampahafantaro ahy!
Tags: EFFtombony pinteresttahan'ny add-to-cart amin'ny findayPrint
Ny Lainga ratsy fanahy izay nanenona ireo valan-javaboary sosialy
Mar 29, 2009 ao amin'ny 5: PM PM
Tsy afaka mampiasa feedburner.com fotsiny ve ianao? Hatramin'ny nividianan'i Google azy dia mety hampidirina amin'ny Google Analytics tsy ho ela ny antontan'isa… manantena aho amin'ity taona ity!
Eny, mampiasa Feedburner aho amin'izao fotoana izao handrefesana ny fahafahako. Na izany aza, tsy tiako ny fanemorana ny famoahana ao amin'ny Feedburner ary mankahala marina ny famakafakana ao anatiny sy ny fomba fanehoany ny fitomboana sy ny fampiasana azy.
Tsy naheno aho fa mikasa ny haka ny antontan'isa Feedburner amin'ny Google Analytics izy ireo - fa mety tsara izany!
Tohizo ny hafatrao!
Mar 29, 2009 ao amin'ny 9: PM PM
Tsy ho gaga aho raha mampiditra an'ity GA ity amin'ny ho avy… lojika ihany satria Google no tompon'ny Feedburner… ary mino aho fa tsy ianao no olona voalohany nanandrana an'io.
Mar 30, 2009 ao amin'ny 12: PM PM
Tsy mandika ny fepetra fampiasana izany ve? Tsy tiako ny mahita fa voarara amin'ny Google Analytics aho amin'ny fampiasana ny lohamiliny amin'ny fomba tsy manara-penitra (izany hoe avy amin'ny fangatahana Img).
Ary raha manova ny API-ny ​​izy ireo (izany hoe ny filaharan'ny paramètre, ny isan'ny paramètre, sns, dia mety ho tapaka izany)
Aleo manao izany miaraka amin'ny accont fitiliana!
Jolay 6, 2009 amin'ny 12:15 PM